काठमाडौं, १७ पुस । नेपाली सिने क्षेत्रमा हिरोइज्म देखाउन सफल नायिका शिल्पा पोखरेलको मुख्य भुमिका रहेको नेपाली कथानक चलचित्र वीराङ्गनाको पोष्ट प्रोडक्शनको काम धमाधम भइरहेको छ। अनुप बिक्रम शाही, पृथ्वी प्रसाईं, धिरेन शाक्य , प्रज्वल गिरी, प्रिया रिजाल, ध्रुव कोइराला, कृष्ण शिवाकोटी ,अमृत सापकोटा , अंशु थापा ,सबिर बुढाथोकी ,किशोर झा लगायतको कलाकारहरुको अभिनय रहेको […]
काठ्माण्डौ, ११ पुस । नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा चर्चित र सफल नायक माओवादी अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिमा हिट भइरहेका बेला उनकी नातीना स्मिता दाहाल हिट गायीका बनेकी छीन्। विभिन्न चर्चित गितमार्फत बजारमा आएकी प्रचण्ड नातीनि स्मिताले पछिल्लो दिनमा नेपालको विकास कसरी गर्ने भन्ने भावमा नेपालको पानी जनताको लगानी नामक म्युजिक भिडियो लिएर […]
Posted in Videos,मनोरञ्जन,मुख्य समाचार Read More »
काठमाडौं, पुस । नायीकाहरु समाजको एउटा आदर्शको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छन् । पछिल्लो समयमा नायीकाहरु को बढि नांगीने भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्न व्यस्त देखिन्छन् । यसै क्रममा आफूलार्य सभ्य र सोम्य नायीकाको रपमा स्थापित गराएकी प्रियंका चोपडा बलिउडबाट हलिउडमा पुगेपछि नांगिन थालेकी चर्चा आउको छ । बलिउडमा काम गरिन्जेलसम्म नायिका प्रियंका चोपडाले विकिनी दृश्यमा आफूलाई ढाल्न चाहिनन् […]
-गोकर्ण गोतम चकलेटी हिरो–हिरोइन, दुईचार थान पञ्चलाइन र द्वअर्थी संवाद, केही रोनाधाना, केही रोमान्स अनि आइटम गीत यही सूत्रमा अल्झिएका हुन्छन्, प्रायस् नेपाली फिल्म । जबकि, सामाजिक विषयलाई कलात्मक शैलीमा पर्दामा पस्केर सिनेमाको वजन बढाउन यो प्रवृत्ति कहिल्यै फलादायी हुन सक्दैन । यही महत्वबोध गरेर हुनुपर्छ, मसलेदार समीकरणबाट मुक्त सिर्जनशील फिल्म प्रदर्शन हुन्छन् यदाकदा । […]
भारतीय चर्चीत अभिनेता शशीकपूरको ७९ बर्षको उमेरमा निधन
नयाँ दिल्ली, मंसिर । भारतीय सिनेमा जगतका अत्यन्तै चर्चीत र सफल अभिनेता शशीकपूरको ७९ बर्षको उमेरमा सोमबार निधन भएको छ । शशीकूमारको सोमबार कोकलिवेन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको उहाँको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । सन् १९७० देखि ८० को दशकमा एक सफल अभिनेता तथा निर्मातासमेत रहेर ख्याति कमाएका शशीकपूर लामो समयदेखि मृगौलासम्बन्धी रोगका कारण […]
Posted in अन्तराष्ट्रिय,मनोरञ्जन Read More »
टिभि सो मै लाईभ सेक्स देखाएपछि बबाल (भिडियोसहित)
Posted in मनोरञ्जन,समाज Read More »
नेपाल आइडल वुद्ध लामा र हट गायीका इन्दीरा जोशीको हिडन् स्टोरी
कात्तिक, सार्वजनिक मञ्चहरूमा देखिने मौका नपाएका प्रतिभालाई सतहमा ल्याइदिन्छन्- रियालिटी शोहरूले । टेलिभिजन सञ्चार र केबल नेटवर्कको विस्तारसँगै प्रचारमा आएका यस्ता शोले अनेकन प्रतिभालाई बजारमा स्थापित गरिदिएका छन् । टेलिभिजन च्यानलमा विभिन्न रियालिटी शोबाट आमदर्शकको आँखैअगाडि प्रतिस्पर्धा गरेर, दर्शकको भोटबाटै चयन भएर आएका स्थापित केही सेलिब्रेटीको विवरण क्रमश प्रस्तुत गरिनेछ । अहिले भने सानैदेखि गायक […]
श्रीमान् विदेशमा हुने लाहुरेनीहरुका यस्ता चर्तिकला
दुई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ ? देहसुख अर्थात् सेक्समात्र हो तरु श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू ‘आन्टी’हरूसँग फस्नुका कारण अनेक […]
श्रीमान् विदेशमा हुने लाहुरेनीहरु भन्छन् -‘सन्तुटिको लागि त गर्नैपर्यो’
बलिउड स्टार मनीषा कोइराला भन्छीन् – ‘पकेट मनी’ आउँछ भनेर गरेकी थिएँ
काठमाडौं, ३० भदौ । सिनेमा क्षेत्रमा कसरी आउनु भयो ? शुरुमा अभिनय गर्दा पूरै सिनेमामा आउँछु भनेर खेलेको होइन । सन् १९८८ को कुरा हुनुपर्छ, दिल्लीको धौलाकुँवामा रहेको आर्मी पब्लिक स्कुलमा १२ कक्षामा पढ्दै थिएँ । बिदामा नेपाल आउँदा प्रेम उपाध्याय (नातामा मामा पर्ने)ले उनको विज्ञापनमा खेल्न भन्नुभयो । त्यो विज्ञापनले निकै चर्चा पायो । केही महिनापछि ‘फेरि भेटौंला’ […]